96. တစ်ခါအား အပြည့်သွင်းထားရင် တစ်လလောက် အသုံးခံတဲ့ စမတ်နာရီ	-DigitalTimes
95. လကမ္ဘာသို့	-M-Media
94. Xiaomi Mi Max3တွင် Snapdragon 636 SoC ပါဝင်မည်	-InternetJournal
#Mobile	(08h ago)
ဖွင့်ရန်။ [Zawgyi] ပြီးခဲ့တဲ့လက ထွက်ပေါ်လာခဲ့တဲ့ အသစ်ထွက်မယ့် Xiaomi Mi Max3ရဲ့ TENAA စာရင်းမှာ 1.8GHz octa-core processor ကို ပြသခဲ့တဲ့နောက် Mi Max3မှာ Snapdragon 636 SoC ပါဝင်လာနိုင်တယ်ဆိုတဲ့ ထင်ကြေးတွေ ထွက်ပေါ်လာခဲ့ပါတယ်။ အခုအခါမှာတော့ Mi Max3ဟန်းဆက်အစစ်ရဲ့ ဓာတ်ပုံသစ်တစ်ပုံ ထွက်ပေါ်လာခဲ့ပါတယ်။ အဲ့ဒီဓာတ်ပုံမှာပြသထားတဲ့ ဖုန်းရဲ့ display ပေါ်က “About Phone” screen page မှာ Snapdragon 636 SoC ဆိုတာကို ဖော်ပြထားပါတယ်။ အစောပိုင်းကထွက်ရှိခဲ့တဲ့ ကောလာဟလသတင်းတွေမှာတော့ Mi Max3မှာ Snapdragon 660 chipset ပါဝင်လာမယ်လို့ ဖော်ပြထားပါတယ်။ ဒါပေမဲ့လည်း Redmi Note5Pro စမတ်ဖုန်းမှာ မိတ်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့ Snapdragon 636 နဲ့အတူ 4GB RAM, 64GB storage နဲ့အတူ တွေ့မြင်ရဖို့ရှိပါတယ်။ ဒါ့အပြင် Mi Max3ကို 6GB RAM, 128GB storage နဲ့လည်း ရရှိနိုင်မယ်လို့ဆိုပါတယ်။ ကောလာဟလသတင်းတွေအရ ဒီမော်ဒယ်ကို Mi Max3Pro လို့ခေါ်ဆိုဖွယ်ရှိပြီး Snapdragon 710 ပါဝင်လာဖွယ်ရှိပါတယ်။ Xiaomi Mi Max3မှာ… Read More
93. ဒီတစ်ပတ်အတွက် ရွေးပေးချင်တဲ့ Gadgets များ	-DigitalTimes
92. iPhone X ကို အားသွင်းရင် ၂ ဆ ပိုမြန်အောင် ဘယ်လိုလုပ်မလဲ ?	-DigitalTimes
91. ဒီတစ်ပတ်အတွက် ရွေးပေးချင်တဲ့ Android App များ	-DigitalTimes
90. ကမ္ဘာ့ဖလားဘောလုံးပွဲ၏ နောက်ဆုံးဗိုလ်လုပွဲကို “ဒေတာအသုံးပြုခ နှင့် စာရင်းသွင်းရယူခပေးရန်မလိုဘဲ” My Ooredoo App ကနေ ကြည့်ရှုခွင့်ရမည်	-DigitalTimes
#Local	(12h ago)
89. Motorola ရဲ့ ပထမဆုံး Android Go စမတ်ဖုန်း Moto E5 Play	-InternetJournal
#Mobile	(13h ago)
ဖွင့်ရန်။ [Zawgyi] Motorola ဟာ ဒီလအတွင်း ဥရောပနဲ့ လက်တင်အမေရိကတို့မှာ ရောင်းချသွားမယ့် Android Go စမတ်ဖုန်း Moto E5 Play ကို မိတ်ဆက်လိုက်ပါတယ်။ ဒီ E5 Play စမတ်ဖုန်းသစ်မှာ အမေရိကန်မှာ မိတ်ဆက်ခဲ့တဲ့ E5 Play နဲ့ ကွဲပြားခြားနားပြီး အရွယ်ပိုကြီးတဲ့ မျက်နှာပြင်၊ ပမာဏနည်းပါးတဲ့ RAM နဲ့ သေးငယ်တဲ့ ဘက်ထရီတို့ ပါဝင်လာပါတယ်။ Android Go ဆိုတာကတော့ Android Oreo Go ကိုအခြေခံထားပြီး ဈေးသက်သာတဲ့ hardware ပေါ်မှာ အလုပ်လုပ်နိုင်တဲ့ OS ဖြစ်ပါတယ်။ Go app တွေဟာ ပုံမှန်ဗားရှင်းတွေထက် နေရာအနည်းငယ်သာယူတဲ့အတွက် Android Go စမတ်ဖုန်းတွေမှာ များပြားတဲ့ သိုလှောင်မှုပမာဏ မလိုအပ်ပါဘူး။ E5 Play သစ်မှာ software က တစ်ခုတည်းသော ကွဲပြားခြားနားတဲ့အချက် မဟုတ်ပါဘူး ဒီဖုန်းမှာ ၅.၃ လက်မ display နဲ့ 18:9 aspect ratio ပါဝင်ပါတယ်။ ပုံမှန် E5 Play မှာတော့ ၅.၂ လက်မ 720p display နဲ့ 16:9 aspect ratio ပါဝင်ပါတယ် RAM ပမာဏကလည်း နည်းပါးပါတယ်။ သတိပြုရမှာက Android Go မှာ RAM 1GB အထိပဲ ထောက်ပံ့ဖို့ ကန့်သတ်ထားတဲ့အချက်ပါ။ ပုံမှန်… Read More
88. တောင်ကိုရီးယားက ကားသုံးဖို့ မလိုတဲ့ ဒေါ်လာ ၄၀ ဘီလီယမ်တန် မြို့တော်ကို တည်ဆောက်နေ	-DigitalTimes
#NEWS	(13h ago)
87. Gakken Classroom Franchise ကိုပြည်တွင်း၌ ထပ်မံဖွင့်လှစ်	-InternetJournal
#Education	(16h ago)
ဖွင့်ရန်။ [Zawgyi] ဂျပန်နိုင်ငံရဲ့ Math learning Centre တစ်ခုဖြစ်တဲ့ Gakken Classroom Franchise ဖွင့်လှစ်ခြင်းကို ဇူလိုင်လ ၁၅ ရက်က ရွှေတောင်ကုန်းရိပ်သာလမ်း ရွှေတောင်ကြား ၂ ရပ်ကွက် ဗဟန်းမြို့နယ်မှထက်မံဖွင့်လှစ်ခဲ့ပါတယ်။ ၂၁ ရာစုရဲ့ပြောင်းလဲလာတဲ့ လူနေမှုဘဝပုံစံ၊ လိုအပ်ချက်တွေနဲ့ စိန်ခေါ်မှုတွေကို ရင်ဆိုင်ကျော်လွှားနိုင်စေရန်နဲ့ မြန်မာနိုင်ငံရှိ ကလေးငယ်တွေအနေနဲ့ Joy of Learning (လေ့လာသင်ယူခြင်းကရရှိတဲ့ ပျော်ရွှင်မှု)၊ Self-Confidence (မိမိကိုယ်ကို ယုံကြည်မှု)၊ Zest for Living (ပျော်ရွှင်တဲ့ဘဝကို လူနေမှုပုံစံ) ဟူတဲ့ Gakken ရဲ့ Philosophy ကိုလက်ဆင့်ကမ်းပေးလိုခြင်းဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။ Gakken Classroom ကိုမြန်မာနိုင်ငံတွင် Centre ပေါင်း ၂၂ ခု ဖွင့်လှစ်ခဲ့ကြီးဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။ [Unicode] ဂပြနျနိုငျငံရဲ့ Math learning Centre တဈခုဖွဈတဲ့ Gakken Classroom Franchise ဖှငျ့လှဈခွငျးကို ဇူလိုငျလ ၁၅ ရကျက ရှတေောငျကုနျးရိပျသာလမျး ရှတေောငျကွား ၂ ရပျကှကျ ဗဟနျးမွို့နယျမှထကျမံဖှငျ့လှဈခဲ့ပါတယျ။ ၂၁ ရာစုရဲ့ပွောငျးလဲလာတဲ့ လူနမှေုဘဝပုံစံ၊ လိုအပျခကျြတှနေဲ့ စိနျချေါမှုတှကေို ရငျဆိုငျကြျောလှားနိုငျစရေနျနဲ့ မွနျမာနိုငျငံရှိ ကလေးငယျတှအေနနေဲ့ Joy of Learning (လလေ့ာသငျယူခွငျးကရရှိတဲ့ ပြျောရှငျမှု)၊ Self-Confidence (မိမိကိုယျကို ယုံကွညျမှု)၊ Zest for Living (ပြျောရှငျတဲ့ဘဝကို လူနမှေုပုံစံ) ဟူတဲ့ Gakken ရဲ့ Philosophy ကိုလကျဆငျ့ကမျးပေးလိုခွငျးဖွဈတယျလို့သိရပါတယျ။ Gakken Classroom ကိုမွနျမာနိုငျငံတှငျ Centre… Read More
86. ဦးနှောက်အကျိတ် ရှာဖွေဖော်ထုတ်ရာမှာ ဆရာဝန်တွေကို အနိုင်ရခဲ့တဲ့ တရုတ် AI	-InternetJournal
#News	(17h ago)
ဖွင့်ရန်။ [Zawgyi] တရုတ် AI စနစ်တစ်ခုဟာ ဦးနှောက်အကျိတ်နဲ့ အခြား ကျန်းမာရေးအခြေအနေတွေကို ရှာဖွေဖော်ထုတ်ရာမှာ ထိပ်တန်း တရုတ်ဆရာဝန်တွေပါဝင်တဲ့ အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ထက် ပိုမိုတိကျမြန်ဆန်စွာ ပြုလုပ်နိုင်ခဲ့တယ်လို့ Xinhua က ဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။ BioMind လို့ခေါ်တဲ့ AI ကို Beijing Tiantan ဆေးရုံက ဦးနှောက်နဲ့ အာရုံကြောရောဂါအတွက် Artificial Intelligence သုတေသနစင်တာက ဖန်တီးထားတာ ဖြစ်ပါတယ်။ အဲ့ဒီ AI ဟာ ဖြစ်ရပ် ၂၂၅ ခုထဲက ၈၇ ရာခိုင်နှုန်းကို ၁၅ မိနစ်အတွင်းမှာ မှန်ကန်စွာ ရှာဖွေဖော်ထုတ်နိုင်ခဲ့ပြီး စီနီယာဆရာဝန် ၁၅ ယောက်ပါဝင်တဲ့ အဖွဲ့ကတော့ ၆၆ ရာခိုင်နှုန်းကိုသာ တိကျမှန်ကန်စွာ ရှာဖွေဖော်ထုတ်နိုင်ခဲ့တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ ဦးခေါင်းခွံအတွင်း သွေးလုံးဖြစ်မှုအပေါ် ခန့်မှန်းရာမှာလည်း AI က ၈၃ ရာခိုင်နှုန်းကို တိကျစွာ ခန့်မှန်းနိုင်ခဲ့ပြီး ဆရာဝန်တွေက ၆၃ ရာခိုင်နှုန်း မှန်အောင် ခန့်မှန်းနိုင်ခဲ့တယ်လို့ သိရပါတယ်။ အဆိုပါ AI ကို လေ့ကျင့်ဖို့အတွက် developer တွေဟာ AI ကို ဓာတ်ပုံ ထောင်ပေါင်းများစွာနဲ့ ဆေးရုံရဲ့ လွန်ခဲ့တဲ့ဆယ်နှစ်က ရောဂါရှာဖွေဖော်ထုတ်မှုတွေနဲ့အတူ သင်ကြားပေးခဲ့ပါတယ်။ ဒီ AI ဟာ ဦးနှောက်အမြှေးပါအဖုအကျိတ်နဲ့ အာရုံကြောအကျိတ်အပါအဝင် ဦးနှောက်နဲ့အာရုံကြောရောဂါအချို့ကို မှန်ကန်တိကျမှု ၉၀ ရာခိုင်နှုန်းကျော်နဲ့အတူ ရှာဖွေဖော်ထုတ်ပေးနိုင်ပါတယ်။ “ဒီယှဉ်ပြိုင်မှုကနေ ဆရာဝန်တွေက ကွန်ပျူတာဉာဏ်ရည်တု (artificial intelligence) ရဲ့အစွမ်းကို သိရှိနိုင်ပါတယ်။ အထူးသဖြင့် artificial intelligence… Read More
85. Moto E5 Play Android Go Edition ကို ကြေညာ	-DigitalTimes
84. ဒီတစ်ပတ်အတွက် ရွေးပေးချင်တဲ့ AXE.IO (Android Game)	-DigitalTimes
83. Lenovo Watch9နဲ့ယှဉ်ပြိုင်မယ့် Mijia Quartz Watch နာရီသစ်ကို Xiaomi မိတ်ဆက်	-InternetJournal
#Mobile	(1d ago)
ဖွင့်ရန်။ [Zawgyi] Xiaomi ဟာ classic ဒီဇိုင်းနဲ့ စမတ်လုပ်ဆောင်ချက်အချို့ပါဝင်တဲ့ hybrid နာရီသစ်တစ်မျိုးကို မိတ်ဆက်ခဲ့ပါတယ်။ Mijia Quartz Watch ဟာ analog နာရီတစ်လုံးနဲ့ ဆင်တူပေမယ့် ဖုန်းနဲ့ ချိတ်ဆက်လိုက်တဲ့အခါ စမတ် feature တွေကို unlock လုပ်ပေးမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ Mijia Quartz Watch မှာ စတီးလ်ကိုယ်ထည်ပါဝင်ပြီး ဒိုင်ခွက်ကိုတော့ mineral glass နဲ့ ဖုံးအုပ်ထားပါတယ်။ လဲလှယ်တပ်ဆင်နိုင်တဲ့ကြိုးပါဝင်ပြီး အနက်၊ အပြာ၊ မီးခိုး အရောင်တွေနဲ့ ရရှိနိုင်ပါတယ်။ နာရီမှာ ကယ်လိုရီနဲ့ ခြေလှမ်းရေတွက်စနစ် ပါဝင်ပါတယ်။ ဖုန်းနဲ့ချိတ်ဆက်လိုက်တဲ့အခါမှာ နာရီက ကယ်လိုရီ၊ ခြေလှမ်းနဲ့ ခရီးအကွာအဝေးတို့ကို စောင့်ကြည့်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် alarm နဲ့ reminder တွေကိုလည်း သတ်မှတ်ထားနိုင်ပါတယ်။ Mijia Quartz Watch ရဲ့တန်ဖိုးက ၅၂ ဒေါ်လာဖြစ်ပြီး ဇူလိုင် ၁၇ ရက်မှာ Tmall, Mi Home app နဲ့ Mi အွန်လိုင်းစတိုးတို့ကနေ ရောင်းချသွားမယ်လို့ သိရပါတယ်။ Ref: GizmoChina -နောင်နောင် [Unicode] Xiaomi ဟာ classic ဒီဇိုငျးနဲ့ စမတျလုပျဆောငျခကျြအခြို့ပါဝငျတဲ့ hybrid နာရီသဈတဈမြိုးကို မိတျဆကျခဲ့ပါတယျ။ Mijia Quartz Watch ဟာ analog နာရီတဈလုံးနဲ့ ဆငျတူပမေယျ့ ဖုနျးနဲ့ ခြိတျဆကျလိုကျတဲ့အခါ စမတျ feature တှကေို unlock လုပျပေးမှာ… Read More
82. Android မှာ Google Assistant ကို ပိတ်နည်း	-DigitalTimes